Nihaona nofinofy "fahatsiarovana fahavaratra" -ako
Home > Nofinofy nofinofy "Dream Memory"
Nofinofy nofinofy "Dream Memory"
Ny haingon-trano nofinofin'i Moimili tany am-boalohany "Fahatsiarovana fahavaratra" dia haingo miavaka sy vita amin'ny tanana. Ny tablety amin'ny masoandro mafana dia voaravaka pompôma sy felaka ary volom-borona maro miloko. Na amin'ny andro orana aza, ity saka ity dia hahafaly ny kianja filalaovana ny zazavavy kely.
Ny mpanentana nofy dia natao am-pitandremana voay vita amin'ny felam-by. Ny manontolo dia voaravaka amin'ny tadiny, tadivavarana, bokotra ary pompom na tsipìka.
Fitaovana: kitay, landihazo, rongony hazo, vakana vita amin'ny volony, volom-borona, volon-koditra